Izindlela Ezi-6 Eziphezulu Zokuxazulula Isikhalazo Sokuhweba: Umhlahlandlela Wezomthetho Osomabhizinisi. 0000
Izindlela Ezi-6 Eziphezulu Zokuxazulula Isikhalazo Sokuhweba: Umhlahlandlela Wezomthetho Osomabhizinisi.
Shiya amazwana	/ abameli, Blog / By Sarah
Izindlela Ezi-6 Eziphezulu Zokuxazulula Isikhalazo Sokuhweba Sabosomabhizinisi
Ibhizinisi nobambiswano kungaphenduka kubemuncu nganoma yisiphi isikhathi ngenxa yokwephula inkontileka (eyaziwa njengezithembiso eziphukile noma ezihlulekile). Futhi lokhu kungaholela ekuphikisaneni ngamacala okuhweba noma isivumelwano sekhontrakthi. Kule ndatshana, ake siqonde izindlela ezi-6 zokuxazulula icala lokuhweba.
Kube nemibono eminingi ngesikhala sokusebenza eDubai ekubeni yikusasa lamahhovisi, yize ukusebenza nabo kusesigabeni sokuqala. Konke kuzoncika ekutheni imiphumela izohambisana kanjani nokukhiqiza nokwenza izinto ezintsha.
Ngenxa yobunzima bezomnotho obukhona njengamanje kanye nokungaqiniseki kwesikhathi esizayo, osomabhizinisi abaningi bakhala ngezikweletu zabo ezingaphephile. Ukuze bakhokhele isikweletu sabo, kufanele badlule ezinkantolo futhi balwe izimpi zomthetho. Kulokhu okuthunyelwe, sizokhuluma ngezindlela zokuxazulula amacala wezohwebo. Sizogxila ekutheni kuyini ukuthethwa kwamacala okuhweba nokuthi kungaxazululwa kanjani ngosizo lwabameli. Sizobuye sixoxe ngokuthi umuntu angamthola kanjani ummeli ofanele ongasiza ekuthathweni kwamacala okuhweba.
Kuyini I-Litigation Commercial?
Amacala wezohwebo yindlela esemthethweni ethathwe yinkampani ethile ngokumelene nenye. Lapho kuqulwa khona icala futhi kukhishwa isinqumo esivuna iqembu eliwinile. Ukubambisana emabhizinisini ngokuvamile kufaka phakathi izithembiso zokuletha insizakalo noma umkhiqizo ngokushintshanisa ngemali noma ukucatshangelwa okufanayo. Lapho noma yiliphi iqembu lihluleka ukugcina isithembiso, elinye lingaphoqelela isivumelwano noma inkontileka ngo ukugcwalisa i-civil lawsuit.
Kuze kube namuhla, amacala ezentengiselwano aseyindlela eyinhloko yokuxazulula izingxabano zenani eliphakeme nezinkimbinkimbi e-UAE.
Amacala wezohwebo ahlala eyindlela eyinhloko yokuxazulula izingxabano zenani eliphakeme nezinkimbinkimbi e-UAE.
Izinkinga ezibalulekile okufanele uzicabangele ngaphambi kokuletha isenzo samacala wezohwebo
Iqembu elifuna izinyathelo zomthetho kufanele licabangele lezi zimo ezilandelayo:
a. Ukusebenza komnotho kommangalelwa,
b) Ithuba lommangalelwa lokweqa noma ukubaleka.
Iqembu lingafaka isicelo sokuqapha okuqaphayo enkantolo ukuqinisekisa ukuthi izimpahla ngeke zisatshalaliswe noma zichithwe ngummangalelwa.
Yiziphi izindlela zokuxazulula amacala wezohwebo?
Hamba Ngezimiso Ngokucophelela
Ngaphambi kokusayina noma iyiphi inkontileka, kufanele uyifunde ngokucophelela njalo. Futhi uma kunanoma iyiphi impikiswano, phinda wenze isivumelwano, futhi kulokhu ngokucophelela. Naka izigaba ezithile noma izigaba ezichaza noma yini mayelana -
Kuhlobene nengxabano yakho. Futhi uma wena nosonkontileka wakho nizifezile izibopho.
Izinqubo okudingeka uzilandele esimweni esinjalo noma ngenkathi uxazulula impikiswano yakho.
Isigaba sokunqanyulwa esingakutshela ukuthi ungabuqeda kanjani lobu budlelwano besivumelwano uma unquma ukwenza kanjalo.
Kuhlale kungcono ukuthi uxoxisane nosonkontileka wakho ngaphambi kokuhlela ukuthatha izinyathelo zomthetho. Udinga ukukhomba izindawo ezithile lapho ucabanga ukuthi usonkontileka wenze okungalungile futhi unikeze ithuba lokuphendula. Izingxabano eziningi zimane nje kungenxa yokungaxhumani kahle nokungaqondi. Xoxa nosonkontileka ngezenzo zamakhambi ezidinga ukwenziwa ukulungisa isimo futhi ubone ukuthi uzophendula athini.
Futhi ungazenza zibe ngokusemthethweni izingxoxo ngokwethula abameli ezinhlangothini zombili. Kuyindlela eyisisekelo yokuxazulula ukungaboni ngaso linye. Kuyinto ukuxhumana emuva naphambili ngenhloso nje yokuthola isisombululo sengxabano.
Ayikho inqubo ethile noma imithetho yengxoxo elandelayo. Noma yiliphi iqembu lingathatha isinqumo futhi liqale izingxoxo ngendlela ezolile. Izingxoxo ziqaliswa kunoma yisiphi isigaba: ie, ngaphambi kokufaka icala, ngenkathi kusenziwa icala, ecaleni, noma ngaphambi noma ngemuva kokufakwa kwesikhalazo.
3. Xhumana Nohulumeni Nabasekhaya
Ama-ejensi amaningi osonkontileka bakahulumeni noma amaqembu ezohwebo afanayo anezinhlelo zokuxazulula izingxabano ezivamile okubandakanya osonkontileka. Bangase bathambekele kancane kosonkontileka, kepha ngokuqinisekile bazoba nentshisekelo kunoma yiziphi izingxabano eziphathelene nanoma yimaphi amalungu abo. Ngemuva kwakho konke, ukunconywa kubalulekile ebhizinisini. Ngaphezu kwalokho, uma uthola usizo futhi uxazulule udweshu, nakanjani kuzonciphisa izindleko zakho.
Ukulamula akulutho kepha uhlobo lwezingxoxo olusemthethweni nolwakhiwe ngokwengeziwe. Iphethwe umuntu wesithathu noma umuntu ozimele obizwa ngomlamuleli. Lesi isinyathelo esilandelayo uma uhluleka ukufinyelela esivumelwaneni. Umlamuleli usiza ukukhomba izingqinamba ezinhlangothini zombili, njengoba unombono omusha wengxabano. Lokhu kungasiza ekuxazululeni lolu daba futhi kufinyelele esivumelwaneni esigculisayo. Umlamuli ngokuvamile uyijaji noma ummeli omkhulu.
Lesi sinyathelo sisiza ngokwenza amaqembu womabili abone umbono womunye nomunye. Kuyinqubo engabophi; ingabophezeleka kuphela lapho amaqembu evumelana ngokuvumelana futhi ebhala imigomo, futhi ayisayine.
Izinhlobo zezimpikiswano lapho ukuxoxisana kungaba khona okuwusizo kakhulu -
Izingxabano zomndeni ezifana nokugcinwa kwengane noma isehlukaniso
Isigaba esilandelayo sokulamula. Ekulamuleni, ukuphathwa kusezandleni zombili zombili, kepha ekulameni, amandla aya eqenjini lesithathu njengomuntu ongakhethi ukuthatha izinqumo zokugcina.
Ukulamula, kanye nokuxoxisana kanye nokulamula, kuyingxenye yenqubo yokuxazulula izingxabano (ADR) ehlukile. Lesi sinyathelo sivame ukubandakanyeka ezimweni ezinjalo lapho amandla wezinhlangano zokuxoxisana eseqediwe.
Imvamisa izinkontileka zifaka izigaba zokulamula, ikakhulukazi kuzicelo ze-akhawunti ye-stock-broker, i-akhawunti yomhlalaphansi, noma ikhadi lesikweletu. Kulesi sinyathelo, zombili izinhlangothi zimelwe ngummeli. Umlamuli ulalela zombili izinhlangothi, afunde imibhalo yabo, ubufakazi, ubufakazi, bese ethatha isinqumo. Inqubo iyefana nokuqulwa kwecala, kepha kuphela ngamalungelo wokukhalaza alinganiselwe.
Le nqubo ayibophi, kepha uma zombili izinhlangothi zivumelana, lapho-ke kungaba inqubo ebophayo. Lokhu kuthathwa njengesinyathelo esibucayi njengemfuneko yamacala ezindaweni eziningi. Umuntu ongashadile angaqhuba inqubo noma iphaneli labathathu futhi ubanjelwa emakamelweni okuhlangana noma emahhovisi okulalelwa.
Elinye lamacala ajwayelekile axazululwe ngamacala ebhizinisi ngukwephula isivumelwano. Kulesi sinyathelo, ummeli ubaluleke kakhulu. Ubulungiswa bomphakathi kanye nohlelo nezinkantolo kusetshenziswa kulesi sinyathelo ukuxazulula izingxabano zomthetho. Lesi sinyathelo singaphoqa ohlangothini oluhlukile ukuthi lubambe iqhaza esixazululweni.
Isinqumo senziwa ngokomthetho nangokusebenzisa amaqiniso athululiwe. Isinqumo sokugcina siphothula inqubo yamacala, bese isinqumo siyaphoqelelwa. Kodwa-ke, iqembu elahlulwayo lingadlulisela enkantolo ephakeme.
Ukuxazulula ukungqubuzana kulula kakhulu esigabeni sokuqala, okulula njengokukhuluma. Kodwa njengoba inqubo ikhula kakhulu, kufanele wenze konke kwenziwe ngokomthetho.